ဝသုန် (ပန်းချီဆရာ) - ဝီကီပီးဒီးယား
(ဝသုန် မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
ဤဆောင်းပါးသည် သဒ္ဒါ၊ သတ်ပုံ၊ ရေးဟန် စသည်တို့အတွက် ဝီကီစံညွှန်းနှင့်အညီ အရေးအသား တည်းဖြတ်ပေးရန် လိုအပ်နေသည်။ သင် တည်းဖြတ် နိုင်သည်။ လမ်းညွှန် ဖတ်ပါ။
ပန်းချီဆရာဝသုန် (အမည်ရင်းမှာ ဦးခင်လှ)ကို ၁၉၄၇-ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁)ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်၌ မွေးသည်။ အဖ ဦးလှမောင်၊ အမိ ဒေါ်သန်းတို့၏ မွေးချင်းသုံးယောက်အနက် အကြီးဆုံးသားဖြစ်သည်။ အမည်ရင်း မောင်ခင်လှဖြစ်ပြီး ရန်ကုန်မြို့၊ ကန်တော်ကလေးဇာတိ ဖြစ်သည်။ အထက်တန်းကျောင်းသားဘဝတွင် ကာတွန်း ဦးမောင်လွင် (ငထက်ဖြား)၊ ကာတွန်းဝင်းမောင်တို့ထံမှ ကာတွန်းပညာလေ့လာဆည်းပူးခဲ့သလို ပန်းချီဆရာ ဦးညိုလှထံတွင် ပန်းချီပညာကို သင်ကြားခဲ့သည်။ ၁၉၆၃ မှ ၁၉၆၅ ခုနှစ်အထိ ရန်ကုန် ပန်းချီပန်းပုကျောင်းတွင် ပန်းချီပညာ ဆည်းပူးသည်။ ဒီပလိုမာဘွဲ့ရရှိသည်။
(1-12-1947)ဒီဇင်ဘာ ၁၊ ၁၉၄၇
အောက်တိုဘာ ၂၁၊ ၂၀၀၈(2008-10-21) (အသက် ၆၀)
၁ ပန်းချီသမားဘဝ အစ
၂ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ပန်းချီဆရာ
၃ လင်္ကာဒီပ ရုပ်ပြ
၄ နိုင်ငံတကာ ပန်းချီပြပွဲ
၅.၁ ဝသုန်၏ အတိုဆုံး ဝတ္ထု
၅.၁.၁ အတိုတကာ့ အတိုဆုံး မေတ္တာစာ
၆ ဝသုန်၏ ကောက်ကြောင်း
ငယ်ကတည်း ပန်းချီကိုစိတ်ဝင်စားခဲ့သော်လည်း စတင်ထိတွေ့ခဲ့သည်မှာ ကာတွန်း ရုပ်စုံဖြစ်သည်။ ကာတွန်းပညာကို ဦးမောင်လွင်(ကာတွန်း) ထံမှဆည်းပူးခဲ့ကာ ကာတွန်းမောင်ခင်လှ အမည်ဖြင့်ကာတွန်းရုပ်စုံများကို ရေးဆွဲခဲ့သည်။ ၁၉၆၃ မှ ၇၀ ခုနှစ်အတွင်း ကာတွန်းပေါက်စ မောင်ခင်လှ အမည်ဖြင့် ကာတွန်းလုံးချင်းများ ရေးဆွဲထုတ်ဝေခဲ့သည်။ သို့သော် ဟာသ ဓာတ်ခံ အားနည်းသည် ဟု ယူဆသဖြင့် ကာတွန်းရုပ်စုံရေးဆွဲခြင်းကို ရပ်တန့်ခဲ့သည်။ အခြား ဆရာ တစ်ယောက်ဖြစ်သူ ဦးညိုလှရဲ့ မောင်းနှင်မှုဖြင့် လျို့ ဝှက်သည်းဖိုမဂ္ဂဇင်းအတွက်သရုပ်ဖော်ပုံများကို တစ်ပုံပြီးတစ်ပုံ ဆက်တိုက်ပင်ရေးဆွဲခဲ့သည်။ ထိုမှ ဆက်ကာ မိုးဝေ မဂ္ဂဇင်းတွင် ကဗျာသရုပ်ဖော်ပုံများကိုလည်းရေးဆွဲခဲ့ရာ ဆန်းသစ်မှုရှိသည့် လက်ရာများအဖြစ် အများလက်ခံလာကြသည်။
တကယ်တမ်းပန်းချီနဲ့ အသက်မွေးမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီး ပန်းချီလောကထဲရောက်ခဲ့တဲ့နှစ်က ၁၉၆၅။ ခဲ၊ မင်၊ ရေဆေး၊ ဆီဆေး၊ အခရိုင်းလစ်နဲ့ ပါတိတ်။ မီဒီယံမျိုးစုံ သုံးခဲ့တယ်။ အဲဒီအချိန်ကတည်းက သရုပ်ဖော်ပန်းချီဆရာဆိုတာ ဖြစ်နေခဲ့ပြီ။ မဂ္ဂဇင်းတွေမှာ ဝသုန်ဆိုတဲ့ လက်မှတ်ကလေးတွေ မြင်တွေ့နေခဲ့ရပြီ။ ၁၉၆၅ ကနေ ၁၉၇၀ ပြည့်နှစ်များအထိ ဆိုပါတော့။
ပန်းချီဝသုန်ရယ်လို့ သတိထားလာခဲ့မိတဲ့ နှစ်တွေကတော့ ၁၉၇၀ မိုးဝေကဗျာခေတ်ဦးမှာ။ မိုးဝေကဗျာတွေမှာ တစ်ကြောင်းခြစ် သရုပ်ဖော်ပုံတွေကို ဝသုန်က အံ့မခန်းရေးဆွဲ ပြနိုင်ခဲ့တယ်။ အမျိုးအစားအရဆို Semi Surrealism အမျိုးအစားလို့ သတ်မှတ်နိုင်တယ်။ တစ်ချို့လက်ရာတွေဆို ကဗျာနဲ့မလိုက်ဖက်အောင်ကောင်းလွန်းနေတာကို တွေ့ရတယ်။ အမြင်ဆန်းသစ်တယ်။ အတွေးကောင်းတယ်။ ကဗျာတွေကို အကောင်းဆုံးပံ့ပိုးနိုင်တယ်။ စမ်းစမ်းနွဲ့(သာယာဝတီ)ရဲ့ အသည်းနှလုံးကိုထုခွဲခြင်း ကဗျာမှာ သရုပ်ဖော်ပေးခဲ့တဲ့ ဆရာဝသုန်ရဲ့ အီလက်စရေးရှင်း လက်ရာဟာ ကဗျာကိုပံ့ပိုးနိုင်ခဲ့တဲ့ အပြင်ခေတ်ကိုပါတောက်ပစေတယ် လို့ ဒီခေတ်ကို ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ လူတွေက ပြောပြလိမ့်မယ်။
အဲဒီအချိန်၊ အဲဒီအခါက ရှု့မဝမှာ ဗဂျီအောင်စိုးရဲ့ ကဗျာသရုပ်ဖော်ပုံတွေကလည်း အရမ်းကို ကောင်းလွန်းပြီး ကျော်ကြားနေတဲ့အချိန်။ ရှုမဝမှာ ဗဂျီအောင်စိုးလက်ရာမပါရင်မဖြစ်သလို မိုးဝေကဗျာတွေမှာ ဝသုန်ရဲ့လက်ရာ မပါရင် မပြည့်စုံဘူးလို့တောင် ဆိုကြတယ်။ (ကန့်ကွက်ချင်တဲ့လူတွေ၊ လက်မခံချင်တဲ့ လူတွေ ရှိမယ်။ ရှိတဲ့အတိုင်းပဲ ထားပါတော့။) ၁၉၇၀ ပြည့်လွန်နှစ်တွေကနေ ၁၉၇၄၊ ၁၉၇၅ နှစ်များအထိပဲ ဆိုကြပါစို့။
၁၉၈၆ ခုနှစ်မှာ လူထုဦးလှ၏ လှောင်ချိုင့်အတွင်းမှ ငှက်ငယ်များ ကို ထိုင်းနိုင်ငံမှ THE CAGED ONES အမည်ဖြင့် အင်္ဂလိပ်ဘာသာသို့ ပြန်ဆိုထုတ်ဝေရာတွင် မျက်နှာဖုံးနှင့် အတွင်းသရုပ်ဖော်ပန်းချီများ ရေးဆွဲပေးခဲ့ရသည်။
၁၉၉၄ ခုနှစ်တွင် UNICEF မှ ကမ္ဘာ့ကလေးသူငယ်များ ရန်ပုံငွေအဖြစ် ပို့စကဒ်ပြက္ခဒိန်ထုတ်ဝေရာမှာ ကြာပန်းများ (Lotus) အမည်ရှိ ရေဆေးပန်းချီကား ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၇၃ - ၈၀ ခုနှစ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ ပန်းချီပန်းပုကောင်စီ တွဲဖက် အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး၊ ဘဏ္ဍာရေးမှူးအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
၁၉၇၇ ခုနှစ်တွင် ချစ်ဦးညို၏ လင်္ကာဒီပချစ်သူ ဝတ္ထု ထွက်လာခဲ့သည်။ ဗညားသီဟ၏ စာပေစစ်တမ်းက လင်္ကာဒီပချစ်သူကို ပယ်ပယ်နယ်နယ် ဝေဖန်ခဲ့သည်။ ၁၉၇၉ တွင် ရှုမဝ မဂ္ဂဇင်း၌ ပန်းချီဝသုန်၏ လင်္ကာဒီပချစ်သူ ရုပ်ပြဇာတ်လမ်းဖော်ပြခဲ့သည်။ ချီးကျူးမှု ခံရသည်။ ရှုမဝတွင် လင်္ကာဒီပချစ်သူရုပ်ပြကို ၃၆ လကြာ လစဉ် ဖော်ပြခဲ့သည်။
လူတိုင်းပါစပ်ဖျားတွင် စွဲခဲ့သော ဝသုန်၏ လင်္ကာဒီပချစ်သူဇာတ်လမ်းသည် ၁၉၈၄ ခုနှစ်တွင် လုံးချင်းရုပ်ပြအဖြစ် ထွက်ရှိလာသည်။ ပို၍ အောင်မြင်ခဲ့သည်။ ဆယ်နှစ်အကြာ ၁၉၉၄ တွင်တစ်ကြိမ်၊ နောက်ထပ် ဆယ်နှစ်အကြာ ၂၀ဝ၄ ခုနှစ်တွင် တစ်ကြိမ်။ သုံးကြိမ်တိုင် ရိုက်နှိပ်ထုတ်ဝေရသည်။
လင်္ကာဒီပချစ်သူရုပ်ပြသည် ဆရာဝသုန်၏ လက်ရာများအနက် အထွဋ်အထိပ် ရောက်သော လက်ရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ နောက်ထပ်ရုပ်ပြဇာတ်လမ်းများ ဆက်ထွက်လာခဲ့သော်လည်း လင်္ကာဒီပချစ်သူကို မမီဟု ဆိုကြသည်။ မျက်နှာဖုံး သရုပ်ဖော်များ ရေးဆွဲရာတွင်မူ ဆက်လက် အောင်မြင်ခဲ့သည်။ မဂ္ဂဇင်းစာမျက်နှာများတွင်လည်း ဝသုန်၏ လက်ရာများကို မြင်တွေ့နိုင်သည်။
ပန်းချီရေးသက် နှစ် ၃၀ ကျော်အတွင်း ပါတိတ်ပန်းချီပြပွဲများကို ၄ ကြိမ်တိုင်တိုင် ဦးဆောင်ကျင်းပခဲ့သည်။ ၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင် တစ်ကိုယ်တော်ပန်းချီပြပွဲ၊ ပြည်ပပန်းချီပြပွဲများအဖြစ် ၁၉၈၈ ခုနှစ်၌ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ၊ ဆိုးလ်မြို့တော်မြို့၌ လည်းကောင်း၊ ၁၉၈၉ ခုနှစ်၌ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဘန်ကောက်မြို့၊ ၁၉၉၃ ခုနှစ်တွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ဖီလာဒယ်လ်ဖီးယားတို့တွင် ပါဝင်ပြသခဲ့သည်။
၁၉၇၅ ခုနှစ်တွင် ရုပ်ရှင်မျက်မှန်မဂ္ဂဇင်းတွင် သားလေးအမည်မသိ ဝတ္ထုတို စတင်ရေးသားခဲ့သည်။ မိုးမိုး (အင်းလျား) အမှတ်တရ ဝတ္ထုတိုပြိုင်ပ္ပွဲ၌ ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင် မိုနာလီဇာနှင့်တွေ့ဆုံခြင်း ဝတ္ထုတိုဖြင့် ဒုတိယဆုရရှိခဲ့သလို ၁၉၉၉ နှင့် ၂၀ဝ၀ ခုနှစ်များတွင်လည်း မနက်ဝိဇ္ဇာ ညမိစ္ဆာ၊ သောကဗျာပါဒ အရေးအကြောင်းများ ဝတ္ထုတိုများဖြင့် အထူးဆု ရရှိခဲ့သည်။
၂၀ဝ၄ ခုနှစ်တွင် သားကလေးအမည်မသိနှင့် အခြားဝတ္ထုတိုများ စာအုပ်ကို သီဟရတနာစာပေတိုက်မှ ထုတ်ဝေ၍ ၂၀ဝ၆ ခုနှစ်တွင် မုဒိတာရေစင်နှင့် အခြားဝတ္ထုတိုပေါင်းချုပ်ကို ပုဂံစာအုပ်တိုက်မှ ထုတ်ဝေခဲ့သည်။
ဝသုန်၏ အတိုဆုံး ဝတ္ထုပြင်ဆင်
အတိုတကာ့ အတိုဆုံး မေတ္တာစာပြင်ဆင်
ကျွန်တော်မိန်းမရစ .. ၊ အဘိုးအဘွားများရွာသို့ ရောက်ခဲ့၏။
“လူလေး၊ အခု မင်းဘာလုပ်သလဲ”
“ကျွန်တော် ပန်းချီဆွဲတယ် အမေကြီး”
“ လူလေး .. မင်း အိမ်ထောင်လည်းကျနေပြီ၊ ကိုယ်ဝါသနာပါရာချည်းပဲ လုပ်မနေနဲ့၊ အလုပ်လေးဘာလေး လုပ်ပါဦး”
အမေကြီး (အဘွား)သည် ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ စာနည်းနည်းသာ သင်ဖူး၏။ ခေတ်ပညာ မတတ်ပေ . .။
တစ်နေ့က ရွာမှလူကြုံနှင့် ဆန်တစ်တင်း အမေကြီးပို့လိုက်သည်။ ပဲတီပင်ပေါက် လက်ရေးနှင့် အမေကြီး၏ စာတစ်စောင်ကိုလည်း ကျွန်တော်ဖတ်ရ၏။
အမေဂျီးစဂါးကို နားမထောင်ဘဲ ဗဂျီဘဲ ရေးနေသီ၊ ခလေးလည်း ၄ရောက်ရပီ၊ အလုပ်လေးဘာလေးလဲ လုပ်အုံး။
(၁၉၉၀ ခုနှစ်၊ မေလ၊ မဟေသီမဂ္ဂဇင်း)
(၂၀ဝ၈)ခုနှစ် အောက်တိုဘာ လဆန်းတွင် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု၊ ဝါရှင်တန်ဒီစီ အခြေစိုက် National Geographic Magazine အဖွဲ့မှ ဦးစီး ကျင်းပခဲ့သော " All Raods Films Festival" (၅) ကြိမ်မြောက် ရုပ်ရှင်ပွဲတော်၌ ဒါရိုက်တာ ကြည်ဖြူသျှင် ရိုက်ကူးသော (၁၅-မိနစ်စာ ဇာတ်လမ်းတို) “ဝသုန်၏ ကောက်ကြောင်း” မှတ်တမ်းတင်ရုပ်ရှင် "A Sketch of Wathone" ပထမဆု အဖြစ်  ရရှိခဲ့သည်။
နောက်ဆုံးအချိန်က ရေးဆွဲခဲ့သည့် လက်ရာမှာ ပဉ္စမအကြိမ်အဖြစ် ထုတ်ဝေမည့် ဆရာကြီးရွှေဥဒေါင်း၏ စုံထောက်ဦးစံရှား အမှတ်(၂)ဝတ္ထုဖြစ်သည်။ ပန်းချီဝသုန်သည် ပန်းချီမောင်မောင်သိုက်၊ပန်းချီကျော်သောင်းတို့နှင့် ပူးတွဲကာ ပန်းချီပြပွဲတစ်ရပ်ကို ပြသရန်စီစဉ်နေစဉ် ၂၀ဝ၈၊ အောက်တိုဘာ ၂၁ ရက်နေ့၊ မနက် ၇ နာရီ ၁၅ မိနစ်တွင် တီဘီရောဂါနှင့် ကွယ်လွန်ရှာသည်။ ကွယ်လွန်ချိန်တွင် ဇနီး ဒေါ်စန်းအေးနှင့် သား ၂ဦး သမီး ၂ဦး ကျန်ခဲ့သည်။
↑ National Geographic။2January 2009 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 1 May 2009 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ FANUC NINJA | Global Source for Speedy FANUC Spares and Repairs
Mizzima Media Archived 24 October 2008 at the Wayback Machine.
National Geographic Archived2January 2009 at the Wayback Machine.
BiWeekely Eleven journal
မနောဖြူ (ရွှေမြန်မာ Blog) Archived4March 2016 at the Wayback Machine.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဝသုန်_(ပန်းချီဆရာ)&oldid=704023" မှ ရယူရန်
၇ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၃:၂၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၇ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၃:၂၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။